Laser akara Machine - Jinan Lingxiu Laser Equipment Co., Ltd.
[Laser akara Machine]
Eriri laser marking
Eriri laser marking igwe adabara-arụ ọrụ na kasị metal marking ngwa
dị ka Gold, Silver, igwe anaghị agba nchara, Brass, Aluminium, Steel, Iron Iitanium etc,
na nwekwara ike akara ọtụtụ ndị na-abụghị metal ihe, dị ka ABS, naịlọn,
PES, ịkwanyere, Makrolon.
akpụkpọ anụ, osisi, textiles, plastik, acrylic, iko, crystal, nkume, MDF, sọrọ-agba osisi, organic iko,
akwụkwọ, jed, agate, na-abụghị ọla wdg
Tumadi dabere na ya pụrụ iche ala-na-ike laser doo ya. Ọ bụ karịsịa kwesịrị ekwesị n'ihi na elu-ọgwụgwụ ahịa nke ultra-ezi nhazi. The na-ebupụta nke karama maka ntecha, pharmaceuticals, nri na ihe ndị ọzọ elu-molekụla ihe na-akara na ezi mmetụta na doo anya na ike markings. Mma karịa ink nzuzo na dịghị mmetọ; mgbanwe PCB board marking, dicing; sịlịkọn fere fere Micro onu, kpuru ìsì oghere nhazi; LCD mmiri mmiri crystal iko abụọ akụkụ code marking, iko n'elu punching, metal n'elu mkpuchi marking, Plastic mkpọchi, electronic components, onyinye, nkwukọrịta ngwá, ụlọ ihe, na na.
Latrik, integrated ibe, eletriki ngwa, nkwurịta okwu ngwa, ngwaọrụ, nkenke ígwè, osisi, nche na clocks, akpaaka akụkụ, crystal iko marking, plastic ikpe wdg
Ekwentị igodo, plastic translucent igodo, latrik, integrated na sekit na sekit (IC), eletriki ngwa, buckles cookware, igwe anaghị agba nchara na ngwaahịa na ndị ọzọ na industrie.
Ọgwụ, onye na-elekọta ngwaahịa, ụtaba, nri na ihe ọṅụṅụ nkwakọ, mmanya, mmiri ara ehi na ngwaahịa, uwe ngwa, akpụkpọ anụ, electronic components, chemical ụlọ ihe ndị ọzọ ọrụ.
Nwere ike kanye-abụghị metal na akụkụ nke metal. Ọtụtụ-eji nri nkwakọ, onunu nkwakọ, ọgwụ nkwakọ, ụkpụrụ ụlọ egbuke, uwe ngwa, akpụkpọ anụ, akwa ọnwụ, craft onyinye, roba ngwaahịa, electronic components nkwakọ, shei nameplates, wdg
Ọ kwekọrọ n'ụzọ European OA ụkpụrụ na a kwadebere n'ụzọ na elu-ọsọ ịgụ isiokwu galvanometer. Ọ nwere elu kpọmkwem na elu na-agba na ike dochie akwụkwọ ntuziaka ájá ọgbụgba ọkụ. The software akara usoro na-eji maka Windows interface. Ọ na-akwado multiple faịlụ gụnyere Al, JPG, CDR, BMP na na. Automatic marking, mfe iji rụọ ọrụ. Dem na N'ogbe.
1. Adabara nile di iche iche nke obi mgbanaka na elu mgbanaka marking;
2. nwekwara ike-eji maka Flange, ọsịsọ, ekenyenede iko na ụdị nile nke gburugburu akpọkwa; (dayameta erughị 50)
3. Ezubere maka laser ụlọ ọrụ, pụrụ ozugbo arụnyere na laser marking igwe worktable;
4. Jụọnụ obere, mara mma anya, mgbe nchara;
Carbon Fiber Cutting Machine , Eriri laser Cutting Machine, Laser Fiber Ịcha Machine, Eriri Cutting Machine 500w,